सबैभन्दा जिज्ञासु र हास्यास्पद शीर्षकहरूको साथ पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
सबैभन्दा जिज्ञासु र हास्यास्पद शीर्षकहरूको साथ पुस्तकहरू
जब हामी पुस्तक किन्छौं, जो एक व्यक्तिले गरेको अनुसार निर्भर गर्दछ, तिनीहरूले एउटा चीज वा अर्कोमा हेर्छन्: लेखक, सारांश वा सारांश, साहित्यिक विधा, यसको मोटाई, यसको आवरण, यसको शीर्षक, ... म हिम्मत गर्दछु। भन्नुहोस् कि यसलाई किन्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने क्रममा सर्वोच्च प्रतिशत लेखक र विधामा आधारित हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाइँ उही लेखक द्वारा अघिल्लो एक मनपराउनु भयो भने, सोच्नुहोस् कि तपाइँ नयाँ प्रकाशित पुस्तक मनपर्न सक्छ। यद्यपि यो सम्भावित भन्दा बढी छ कि कम प्रतिशत, त्यो हो, निर्णय जसले हामीलाई एक किताब किन्न प्रेरित गर्दछ, यसको शीर्षकसँग सम्बन्धित छ।
र शीर्षकहरूको बारेमा कुरा गर्दै, कुनले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै चकित गर्यो? तपाईंले अहिलेसम्म भेट्नु भएका पुस्तकहरूको सबैभन्दा रमाइलो शीर्षक कुन हो? तपाईको ध्यान आकर्षण गर्ने भनेको के हो? अर्को, हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं सबैभन्दा जिज्ञासु र हास्यास्पद शीर्षकहरूको साथ पुस्तकहरू हामीले भेट्टायौं। यदि तपाइँको लेखक उनीहरु लाई ध्यान आकर्षित गर्न को लागी योजना गर्दै थिए, तिनीहरु पक्कै सफल छन्।
तपाईं यी शीर्षक संग एक किताब किन्नुहुन्छ?
"कसरी सुँगुरको रूपमा घर पाउने: उत्तम स्नातकको डोमेस्टिक गाईड", PJ O'Rurke पुस्तक।
"डु men्गामा तीन जना मानिस, कुकुरलाई उल्लेख नगर्न", जेरोम के। जेरोमको पुस्तक।
"मुख्य संख्या को एकान्त", पाओलो जिओर्डानो द्वारा पुस्तक।
"सिंगापुरमा ठूलो पेनिस आतंक: अमेरिकामा जन हिस्टेरियाको भविष्य", स्कट डी। मेंडेल्सनको पुस्तक।
"झाडीमा कसरी छिन्न", Katheen मेयर पुस्तक।
"मूर्ख बच्चाको डायरी", टोनोको पुस्तक (एन्टोनियो डी लाराको छद्म नाम)।
"क्रिश्चियन आर्टमा मशरूमको भूमिका", जोन ए रश पुस्तक।
"Chocadictas को क्लब", क्यारोल म्याथ्यूज पुस्तक।
"साकामुरा, कोरेल्स र लाफिंग डेड", पाब्लो टसेट द्वारा पुस्तक।
"नीलो राजकुमारहरू पनि फेर्दछन्", मेगन म्याक्सवेलको पुस्तक।
"मैले तिमीलाई फेरि मार्नु पर्छ", Charlotte Link द्वारा पुस्तक।
Us हामीलाई जन्म दिने आमा », क्रिस्टिना क्वील्स द्वारा पुस्तक।
«मानिस जो आउँछन् र बहन्छन्», लौरा नोर्टन द्वारा पुस्तक।
"एक मy्गी प्रेमीको संस्मरण", ग्रुपो मार्क्स पुस्तक।
"Sutures बीचको समय", नर्स संतृप्त बाट।
"गोर्डी राम्रो कमबख्त"एलेना डेवेसा र रेबेका गोमेज द्वारा।
Sh यस shitty संसारमा बाँच्न म्यानुअल », लौरा सान्चेज द्वारा पुस्तक।
"हामी सबै बेवकूफहरु संग विवाह", Elaine W. मिलर पुस्तक।
"राम्रो केटीहरू स्वर्गमा जान्छन् र खराब केटीहरू जताततै", Ute Ehrhardt द्वारा पुस्तक।
"एक मूर्खका लागि कसरी काम गर्ने"जोन हूवर द्वारा
"कसरी लि pen्ग बिना व्यवसाय मा सफल हुने"करेन सलमानसोन द्वारा।
"मानिसहरूलाई नरकमा कसरी पठाउने", César Landaeta द्वारा पुस्तक।
"बेस्टेरी", Julio Cortázar पुस्तक।
के तपाईंले ती मध्ये कुनै पढ्नुभयो? कुनले तपाईको ध्यानाकर्षण सब भन्दा बढी पाएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » सबैभन्दा जिज्ञासु र हास्यास्पद शीर्षकहरूको साथ पुस्तकहरू
Times आधुनिक समयमा लेखक भएको धारणा